I-Raw Lorcaserin Hydrochloride Hemihydrate Powder (856681-05-5) iPhoker
I-Raw Lorcaserin hydrochloride hemihydrate powder ngu …….
I-Lorcaserin hydrochloride hemihydrate powder (856681-05-5) ividiyo
I-Lorcaserin hydrochloride hemihydrate powder (856681-05-5) Iinkcukacha
Igama lemveliso I-Lorcaserin hydrochloride hemihydrate powder
Igama leKhemikhali I-Lorcaserin hydrochloride, (R) -8-chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine i-hydrochloride hemihydrate; (R) -8-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-methyl-1h-3-benzazepine i-hydrochloride hemihydrate
Inani leCAS 856681-05-5
I molecular Fi-ormula C22H32Cl4N2O
I molecular WSibhozo 482.31
IMasaisotopic Mass 480.1268745
I-Biological Half-Life I-Lorcaserin inomdla wesiqingatha se-plasma ye ~ ii-11 iiyure
Umzimba Ubunyibiliko bamanzi 0.0709 mg / mL
yoGcino Tukushisa Akukho datha ekhoyo
Aukuguquka I-Raw Lorcaserin hydrochloride hemihydrate powder esetyenziswa njengechiza lokulwa nokutyeba kakhulu. Inendima njengexinzelelo lokutya kunye ne-agonist ye-serotonergic.
I-Lorcaserin hydrochloride hemihydrate powder (856681-05-5) Inkcazelo
I-Lorcaserin hydrochloride i-hemihydrate powder yi-hydrate leyo ifom ye-hemihydrate ye-lorcaserin hydrochloride. Isetyenziswe njengesicatshulwa sokulwa nokukhuluphala. Inendima njengesondlo esinxilisayo kunye ne-agonist ye-serotonergic. Iqukethe i-lorcaserin hydrochloride.
I-Lorcaserin hydrochloride i-hemihydrate powder isebenzisa ukunyanyisa ukukhuluphala okunxulumene ne-cholesterol ephakamileyo, uxinzelelo lwegazi oluphezulu okanye udidi lwe-2 yesifo sikashukela.
I-FDA ivumile i-Raw Lorcaserin hydrochloride i-hemihydrate powder kubantu abanokugqithisa (kunye ne-index mass mass, okanye i-BMI, ye-30 okanye ngaphezulu) okanye ngubani ogqithiseleyo (kunye ne-BMI ye-27 okanye ngaphezulu) kwaye ubuncinane ubunzima obuncinane- imeko enempilo enxulumene neyohlobo lwe-2 yesifo sikashukela, uxinzelelo lwegazi oluphezulu okanye i-cholesterol ephezulu.
I-Lorcaserin hydrochloride i-hemihydrate powder isebenze ngokulawula ukutya - ngokukodwa ngokusebenzisa i-brain receptors ukuze i-serotonin, i-neurotransmitter edala ukuvakalelwa. I-Serotonin nayo ibandakanyeka kwimvakalelo; ezininzi izidakamizwa ezixhatshazelayo zisebenza ngokuthintela ukubuyiswa kwakhona kwe-serotonin kunye nokugcinwa kweengqondo eziza kuhlamba kwiikhemikhali. Abaphandi kwi-Arena bathi izidakamizwa zabo zenzelwe ukufumana kuphela i-serotonin receptors ezichaphazela ukutya.
I-Lorcaserin hydrochloride hemihydrate powder (856681-05-5) Indlela yokuSebenza
I-Lorcaserin ikholelwa ukuba iyancipha ukusetyenziswa kokutya kwaye ikhuthaze i-satiety ngokukhetha i-5-HT2C i-receptors kwi-anorexigenic pro-opiomelanocortin neurons e-hypothalamus. Indlela echanekileyo yesenzo ayiyazi.
I-Lorcaserin kwi-dose yemihla ngemihla ecetyiswayo idibanisa kunye ne-5-HT2C i-receptors xa kuthelekiswa ne-5-HT2A kunye ne-5-HT2B i-receptors (jonga i-5), nezinye i-5-HT i-receptor subtypes, i-5-HT, kunye ne-5-HT. .
isicelo I-Lorcaserin hydrochloride hemihydrate powder (856681-05-5)
Ukuxhalabisa ukutya: Ummeli osetyenziswayo ukunciphisa ukutya.
i-serotonergic agonist: I-arhente enobudlelwane be-serotonin receptors kwaye iyakwazi ukulinganisa imiphumo ye-serotonin ngokukhuthaza umsebenzi we-physologic kwi-cell receptors. Ama-agonists aseSerotonin asetyenziswa njengama-antidepressants, anxiolytics, kunye nokunyangwa kweengxaki ze-migraine.
Unconywe i-Lorcaserin hydrochloride hemihydrate powder (856681-05-5)
Ekubeni ulwazi olufanelekileyo malunga nokusetyenziswa kweLorcaserin hydrochloride hemihydrate ayinakufumaneka, le nkcazelo elandelayo yenzelwe kuphela:
I-dose ephakanyisiweyo ye-lorcaserin ngu-10 mg olawulwa ngomlomo kabini ngosuku. I-Lorcaserin ingathathwa ngaphandle kokutya. I-Lorcaserin kufuneka ishiywe kwizigulane ezingaphumeleli ukufezekisa ubuncinane i-5% yokulahleka kwesisindo ngeveki ye-12 ekubeni ezi zigulane azikwazi ukufumana ukulahleka kwesisindo esinomdla kunye nokunyanga okuqhubekayo.
iinzuzo I-Lorcaserin hydrochloride i-hemihydrate powder (i-856681-05-5)
I-Lorcaserin hydrochloride i-hemihydrate powder yi-5-HT2C i-receptor agonist ekucingelwa ukunciphisa ukutya okudityanisiweyo ngokusebenzisa inkqubo yePOMC ephakathi. Inzuzo yefowuni yaseLorcaserin HCL:
I-Lorcaserin hydrochloride i-hemihydrate powder isetyenziswe kunye nokutya kunye nokuzivocavoca ukuphatha ukukhuluphala.
Ngesinye isikhathi i-Lorcaserin hydrochloride i-hemihydrate powder isetyenziselwa ukuphatha ukukhuluphala okunokuthi ihlobene nesifo sikashukela, i-cholesterol ephezulu, okanye uxinzelelo lwegazi oluphezulu.
I-Lorcaserin hydrochloride hemihydrate powder ayiyi kunyanga nayiphi na imeko yezempilo (njengentliziyo yesifo, isifo sikashukela, uxinzelelo lwegazi).
Imiphumela I-Lorcaserin hydrochloride hemihydrate powder (856681-05-5)
I-Lorcaserin hydrochloride hemihydrate powder isetyenziselwa unyango lokulawula ubunzima obungapheliyo kubantu abadala abane-index mass mass (BMI) ye-30 okanye ngaphezulu (ukutyeba kakhulu) njengokongeza kwi-calorie yokutya kunye nokuzivocavoca. Ikwavunyiwe ukuba isetyenziswe ngabantu abadala abane-BMI engama-27 okanye ngaphezulu (ukutyeba kakhulu) kwaye abanesimo esinye esimalunga nobunzima esifana noxinzelelo lwegazi (uxinzelelo lwegazi), okanye i-cholesterol ephezulu (i-dyslipidemia). Nangona kunjalo, inokuba neziphumo ebezingalindelekanga. Njengasezantsi:
Tiziphumo eziqhelekileyo ezichaphazelekayo:
Ezinye iziqhelo ezingekho phantsi kodwa ezibi kakhulu ezinxulumene ne-lorcaserin ziquka: